Sida Looga Faa'iidaysto Maanta WordPress | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/Sida Looga Faa'iidaysto Maanta WordPress
Sida Looga Faa'iidaysto Maanta WordPress
Riig & Ciyaar
Haddi aad tahay ruug cadaa WordPress ah ama qof cusub, had iyo jeer waxaa jira waxyaabo la barto oo la dheefshiido. Waxaan bilaabay in aan WordPress u isticmaalo blog-kayga gaarka ah sannadkii 2005. Iyadoo asxaabta iyo asxaabteyda ay ku mashquulsanayeen isticmaalka Blogger, LiveJournal, Typepad iyo ereyada kale, waxaan abuurayay waxyaabo u qalma Pulitzer (afeef: mawduuc) oo leh dareen cajiib ah iyo madal user-saaxiibtinimo.
Si degdeg ah 14 sano ka dib iyo WordPress weli waa boqor.
Qiyaastii 60 boqolkiiba dhammaan mareegaha leh Nidaamka Maareynta Maaddada (CMS) waxay isticmaalaan isha furan iyo uber-flexible platform WordPress. Aynu nidhaahno/rajayno in ganacsigaagu uu ka mid yahay. Intee in le'eg ayaad ku kalsoon tahay inaad si buuxda uga faa'iidaysanayso dhammaan wanaagga hodanka ah ee ay WordPress bixiso? Mise waxaad asal ahaan u isticmaashaa sidii mashiinka nuxurka hal-beegga ah oo aan lahayn istiraatiijiyad ganacsi oo dhab ah oo ka dambeysa?
Sida iska cad WordPress-ka maanta aad ayuu uga badan yahay kaliya madal blogging fudud. Waxay si joogto ah u horumaraysaa oo ay la soo baxaysaa mid kasta oo cusub, la beddeli karo, la cusboonaysiiyay-xitaa bilaash!—plugin. Plugins iyo qalabyada ayaa fure u ah ilaalinta iyo kordhinta shaqada goobtaada.
Isagoo ka hadlaya plugins, waxaa jira in ka badan 50,000 oo iyaga ka mid ah. Midkoodna ma sameeyo espresso. Waxay u cusboonaysiiyaan si joogto ah iyada oo ay ugu mahadcelinayaan koox horumariyayaal ah oo shaqeeya saacad kasta sababtoo ah waxay u heellan yihiin/jecelyihiin/iska indhatireen qoysaskooda.
Uma baahnid tobanaan kun oo plugins. Laakiin waxay kuxirantahay yoolalka iyo rabitaanka shirkaddaada, si fiican, waxaa jira plugin ah taas.
4-ta S: Raadinta, Amniga, Istaatistikada & Bulshada
SEO waa maskaxda ugu sareysa ee hay'adaha intooda badan, adigoo u maleynaya inaad rabto dhagaystayaasha bartilmaameedka ah iyo macaamiisha suurtagalka ah inay dhab ahaantii ku helaan. Websaydhku waa inuu ahaadaa wax aan ahayn mid fudud. Markaa hubi inay fududahay in la helo.
Yoast, oo ah #1 WordPress SEO plugin maanta, waxay ku faantaa astaamo badan oo udub dhexaad u ah falanqaynta SEO, akhrinta, falanqaynta kelmada muhiimka ah ee la xidhiidha, iyo caawinta guud ahaan abuurista nuxurka. Plugin-ku wuxuu kaloo kuu ogolaanayaa inaad ku darto sumado si aad u wanaajiso darajadaada goobidda. Caadi ahaan waxa jira plugins aasaasiga ah iyo noocyada premium. Tusaale ahaan, Yoast Premium waxay ku kacaysaa $89/sannadkii sifooyin fiican oo dheeri ah sida aaladda indha-indhaynta iyo aragtida bulshada.
Squirrly SEO waa mid kale oo dadka ka farxiya. Waxay dib u eegtaa oo ay falanqaysaa bog kasta oo ku yaal boggaaga si ay u horumariso qiimayntooda. Sidoo kale uma baahnid inaad noqoto khabiir SEO ah si aad tan u isticmaasho. Taas u daa… khabiirada SEO.
Qalabka Akismet waa mid ka mid ah pluginsyada amniga ugu caansan, iyo sabab wanaagsan: Waxay qabtaa spam. (Waad ogtahay, sida faallooyinka "farmasiga internetka ee badbaadada leh ee Nikes ee bilaashka ah".) Qalabku wuxuu asal ahaan ka ilaaliyaa mareegahaaga waxyaabaha xaasidnimada leh, oo ay ku jiraan soo gudbinta foomka xiriirka. Haddii qof uu isku dayayo inuu Trojan Horse ka dhigo goobtaada, waa inay dhex maraan Akismet-ka weyn si ay u sameeyaan.
Sucuri waa plugin kale oo amniga ah kaas oo soo saara oo hagaajiya malware iyo jabsiga iyada oo laga hortagayo weerarrada mustaqbalka. Waxaad heli doontaa la socodka mareegaha iyada oo loo marayo cusboonaysiinta maalinlaha ah. Sidoo kale, maadaama goobaha WordPress lagu bartilmaameedsan karo jebinta amniga iyo jabsiga ay sabab u tahay qalab kasta oo nugul iyo furaha sirta ah ee daciifka ah, hubi inaad hubiso iThemes Security.
Xiisaynaya xisaabaadka? Dabcan waad tahay. Qof kastaa wuu jecel yahay nambarada, ilaa tirooyinka ay xun yihiin mooyaane, ka dibna aad isku daydo oo aad aaso tirooyinka. Laakiin taasi waa sheeko kale.
MonsterInsights waa plugin ka faa'iidayso Google Analytics. Waxay la socotaa dashboard-keeda oo waxay ku siinaysaa warbixinnada falanqaynta ee la habeeyey ee ku saabsan tirakoobka daawadayaasha, waxqabadka nuxurka, darajada Google iyo wax ka badan. Qaybta ugu fiican? Uma baahnid inaad awood u yeelan karto inaad cod geliso. Markaa waxaad gabi ahaanba joojin kartaa iska yeelyeelka mar kasta oo horumariye uu ag marayo.
Waxa kale oo aad aadi kartaa wax yar oo dugi hore ah oo aad isticmaali kartaa Google Analytics Dashboard ee WP kaas oo ka shaqeeya koodka raadraaca Google Analytics ee ugu dambeeyay si aad u aragto xisaabaadkaaga. Ugu dambeyntii, marka laga reebo inuu yahay lakab kale oo ammaan ah, Jetpack sidoo kale waa plugin loogu talagalay tirakoobka goobta iyo falanqaynta, qoraallada la xidhiidha iyo inaad barato dhagaystayaashaada. Laakin ma aha hab gurracan.
Plugins bulshadu aad bay muhiim u tahay haddii aad rabto in goobtaadu noqoto mid bulsheed oo caan ah oo ka soo horjeeda bulshada oo gebi ahaanba la iloobo. (ku soo dhawaada dugisga sare.) Waxa aad balaadhin kartaa dhagaystayaashaada adiga oo la xidhiidha wax kasta oo aad haysatid, adiga oo hubinaya in dhamaan fariimahaaga bulsho la heli karo wakhti kasta iyo meel kasta.
Mid ka mid ah plugins wadaagga bulsho ee ugu wanaagsan waa Dagaalka Bulshada, kaas oo siiya badhamada wadaagga dhammaan shabakadaha bulshada ee ugu sarreeya. Dagaalka bulshadu uma dhimo degelkaaga sida ay sameeyaan badhamada la wadaaga qaar ka mid ah badhamada laftoodu waa kuwo soo jiidasho leh. Waxaan hubaa inaad ku aragtay badhamada Facebook iyo Twitter-ka ee aan quruxda lahayn ee boggaga kale. Waxay kaa dhigaysaa inaadan rabin inaad la wadaagto. Waligaa.
Waxyaabaha kale ee xiisaha iyo xiisaha leh ee bulsheed waxaa ka mid ah:
Quudin Instagram: Waxay si sahal ah uga soo jiidataa qoraalada saaxiibtinimada mobaylka akoonkaaga Instagram-ka mareegahaaga oo ay ku jirto badhanka "Raac Instagram" oo anfacaya.
Youtube Embed: Saaxir YouTube-ka waxa uu ka dhigaa ku-xidhka fiidyowga dadaalla'aan, iyada oo ka soo horjeedda in gadaal iyo gadaal loo rogo inta u dhaxaysa tafatirayaasha xannibaadda ee Gutenberg. Waxa kale oo aad samayn kartaa liisaska-ciyaaraha iyo qulqulka tooska ah ee YouTube.
Soo noolaynta Boostii Hore: Haddii kale loo yaqaan, sidee baan dib ugu soo celin karaa boostada blog-ka ee aan qoray taas oo kaligeed wax ka beddeshay muuqaalka muuqaalka sidaan u naqaanno? Dadku waa inay mar kale arkaan!
Sassy Social Share: U oggolow isticmaaleyaashaadu inay kuu qabtaan shaqada adiga oo la wadaagaya macluumaadkaaga kanaalada warbaahinta bulshada. Waxaad ku bixin kartaa tiraab wanaagsan. Fudud, toosan oo, sida muuqata, sassy.
Si aad u hubiso xitaa plugins aad u yaab badan oo aan shaki ku jirin in ay baddali doonto noloshaada iyo nolosha kuwa kugu xeeran, booqo Xarunta Xallinta WP Engine iyo sidoo kale hagahan waxtarka leh ee plugins, kaas oo ku dhex socon doona noocyada kala duwan ee plugins halkaas iyo ku tali qaar ka mid ah kuwa ugu fiican.
Inkasta oo tirada pluginsku ay bataan maalin kasta --labadaba bilaash iyo kuwa premium--kuwa ugu fiican waxay leeyihiin awood joogitaan oo cajiib ah. Laakiin hadalkayaga ha qaadan. (OK, u qaado eraygayaga.)
Burburinta Roodhida WordPress: Sida Looga suurtageliyo Boggaga WordPress
5 Sheekooyinka Xaasaska SEO oo aan tagi doonin